Izindaba - Isaziso samaholide
Kusukela ngoFebhuwari 11 kuya kuFeb 17, sizogubha uMkhosi Wentwasahlobo ngalesi sikhathi. Ukulethwa kwasendaweni kuzoqala kabusha ngoFebhuwari 16. Ukulethwa kwamazwe omhlaba kuzoqala kabusha ngoFebhuwari 18. Ithimba lethu lezinto zokusebenza lizosebenza ngoFebhuwari 18 futhi.
Ukwesekela ukulethwa okusheshayo kwama-oda kuma-COBID-19 ahlobene ne-proudcts afana ne-SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit, sizosekela umsebenzi wokukhiqiza ezingeni elincane. Siphakamisa amaklayenti ethu alinganiselwe ukuthi akhokhe ama-oda kusenesikhathi nethimba lethu lokuthengisa. Sizogcina isithembiso sethu sokuletha ukulethwa ngesikhathi esifanele ngemuva kwamaholide.
Unyaka onzima ngendlela exakile ngonyaka owedlule ka-2020. Futhi, bonke abantu balwa nothando nesibindi sethu. Siyethemba ukuthi bonke abangane bethu abayigugu bangaphila unyaka ongcono ngo-2021. Masisebenzisane, silwe negciwane le-COVID-19 futhi sibuyise impilo yethu ejwayelekile ngethemba.
Ukukhanya kuzosusa bonke ubumnyama. Impilo izoqhubeka!